Umhla My Pet » Ezintandathu Flags Red Ukuze Spot On The Umhla First
Xa kuziwa kwi kumhla wokuqala, akusayi kubakho uxinzelelo olukhulu owungqongileyo. Yintoni ukunxiba, ukuya kwanoko ukuthetha apho. Yonke kunokuba kunzima. nokuba, kukho iindlela ezimbalwa ezibalulekileyo kakhulu kufuneka silumkele ngomhla wokuqala. Ndithetha ngayo imiqondiso zoyikekayo isilumkiso neflegi ebomvu.
Yinto kuvakala ukuba ube koyika ngomhla wokuqala, ngoko andiyi ndikutshoyo kufuneka sihlalutye sonke isigwebo kunye nentshukumo lwakho umhla, kodwa kukho ezimbalwa enkulu amaza nesahlulo ukuba ndikhangele.
Ifowuni Ngexesha Umhla
Ndiyaqonda ngoku siphila iteknoloji kuluntu enzima, kodwa nje wabeka ifowuni. Ngefowuni ngexesha mhla nje njengesenzo krwada ngolo hlobo. Nto eyenza umntu azive ngathi ba ingabangeli kakhulu ukuphulaphula kunokuba imiyalezo ngexesha umhla wakho. iitekisi zakho nabahlobo bakho ukulinda kwiiyure ezimbalwa. Ngoko xa intloko elo umhla wokuqala, beka ifowuni yakho cwaka nilishiye epokothweni okanye esipajini sakho kwezi ziseleyo ngomhla. Ukuba abakwazi ukuseta ifowuni ecaleni zabo ngomhla wokuqala, ngaphezu kusenokwenzeka abasoze wahlala phantsi ifowuni yabo.
Kakhulu Ngesondo enohlaselo
Kukho umahluko phakathi kokuba flirty yaye explicated ngesondo. Ukwenza izimvo ezimbalwa elimsulwa lulungile (ezifana ekusekeleni ngokufutshane isinxibo sakho okanye imbonakalo), kodwa ukuba baqalise ukwenza izimvo ezingcolileyo ngaphezulu, kufuneka kokuhlola umhla wakho. Wonke uthanda kufuneka zincediswe, Kodwa ke ukuba umntu kubabandezela umlenze yakho uze umxelele ukuba bafuna indlela kakubi ukukusa ekhaya nje ungakhululekanga. Ukuba ukhangela ubudlelwane bexesha elide, ufuna umhla lowo uzama ukwazi wena hayi nje swi lavaka kuwe esililini.
Yinto akazange uphawu kakuhle ukuba komhla ukuqalisa kwaye / yena sele gxeka. imizekelo: ukuba nje kufika bevela ejimini kwaye wazise umhla kwakho le nempendulo kukho into efana "Owu, ukuze yakho UKUBA uhlobo umntu. Iyonke gym ibuzi?"Okanye xa ufika ukuhlangabezana umhla bakho amadlala oko wanxiba. Ukuba ke gxeka oku kwangethuba kwi, kungenzeka ukuba indlela iya kuhlala kwaye uya kusoloko zigweba ukhetho lwakho.
Talking Way Uyazibaxa Lwabantu
Ngehambo entle sikholisa kokutshintshiselana ekwabelwana ngokulinganayo. Kukho amaxesha apho ukuba wena okanye umhla wakho ongakuthandiyo, lowo ephumayo ngaphezulu kuni ababini baya kukuthwalela ngaphezulu incoko, leyo fayini. nokuba, ukuba umhla ikakhulu incoko one-macala, apho umhla wakho usoloko ethetha ngokwabo, iba isuntswana ndinisa. Kude kuqatsele, xa ndingakunqumli xa uthetha ukuthetha ngakumbi ngokwabo. Umhla lithuba ukufunda okungakumbi omnye komnye kwaye ubone olidibanisayo njani, na ithuba ukuze kuncokolwa ngendlela emangalisayo nokugqibelela wena.
Umsebenzi kunye Living Imeko
Mna andikanyuki, besithi ukuya ngomhla nomntu ophila ekhaya kwaye abangasebenziyo-uqoqosho kunzima ezi ntsuku, ukuba iyaqondakala. Ukuba baye ingeniso ezinzileyo iminyaka kwaye kubonakala kancinane bekhululekile kakhulu kumalungiselelo abo eziphilayo endlwini umzali wabo, mhlawumbi kufuneka uqhubeke. Kufuneka unokuziva ukuba abakwazi ukuba bakuxelele oko kanye ntoni ukuziphilisa. Yintoni uzifihle malunga umsebenzi wakho ukuba awukwazi ukuxelela umhla wakho? Mhlawumbi awufuni ukwazi impendulo…
Nangona lo kunokubonakala kucacile (njengoko umhla wokuqala soze lixesha elihle lokuxoxa ubudlelwane yangaphambili), ukuba bathe bakhulisa ex yabo, sinikele ingqalelo kwindlela bethetha ngazo. Kulungile ukuba nje ngokufutshane khankanya, ke ukuba ndithi kuni indlela ingqondo kwaye njani kangakanani Ndibathiya, ngokwenene kufuneka ukucwangcisa umhla wesibini. Naluphi na uhlobo ntetho silwe okanye uyazithoba ngayo amaqabane abo ngaphambili ibonisa ukuba ngokucacileyo baye ningashukunyiswa kwi bubudlelwane okanye ukuba kukrakra nje athwaxwe, apho kunokwenzeka ukuba le yeyona abaqhubeki ubabone.